Ingabe ama-plugins we-WordPress abiza imali? - Learn Expert Blogging
Ingabe ama-plugins we-WordPress abiza imali?
I-WordPress yipulatifomu esetshenziswe kakhulu ku-Intanethi cishe 41% yabasebenzisi bakha iwebhusayithi yabo ku-WordPress. Kumahhala, umthombo ovulekile, futhi inokuguquguquka okukhulu. Unganweba indlela oyifunayo ngokuningi ongakhetha kukho ngokwezifiso ngama-plugins.
Ama-plugins we-WordPress akhululekile anezici ezinomkhawulo. Bakubiza imali ukusizakala ngezici ezigcwele. Inkokhelo ingaba yesikhathi esisodwa noma ephindaphindwayo ngokususelwa kusevisi oyifinyelelayo.
Ama-plugins ayisigaba se-WordPress Platform. I-WordPress uqobo isoftware yamahhala ekuvumela ukuthi dala amawebhusayithi namabhulogi owafunayo. Ungahlela kalula, engeza imigqa yamakhodi, kabusha, thengisa futhi usabalalise njengoba kuyisoftware evulekile engaphansi kwelayisense yomphakathi jikelele. Kusho ukuthi akukho mkhawulo wokwenza insizakalo enjalo. Noma kunjalo, amaklayenti akhokha unjiniyela ngokungeza ikhodi nokwenza ngcono ukwenziwa ngendlela oyifunayo.
Ama-plugins we-WordPress abiza imali
Ama-plugins we-Free and Freemium WordPress
Ngaphezu kwalokhu, Ama-plugins we-WordPress nawo ayisiqeshana semigqa yokufaka amakhodi, ezisebenza njengesandiso sezici. Ngihlala ngiphakamisa ukuthi iklayenti lami likhokhele izici ze-premium zama-plugins ukukhulisa ukusebenza. Ukungabi umqambi wokufaka amakhodi we-PHP, Ngaso sonke isikhathi ngithatha usizo lwama-plugins.
Noma nini lapho ngakha iwebhusayithi yekhasimende lami, Ngihlala ngicabanga ukwakha iwebhusayithi eyenziwe ngezifiso ngokuphelele ngosizo lwama-plugins wamahhala. Angikaze ngizame ukukhulisa imali abayisebenzisayo. Kwesinye isikhathi, icala lenzeka lapho amanye amaklayenti ami edinga amawebhusayithi aphambili afakiwe. Lesi sifiso siyangiphoqa ukuthi ngihambele izici ze-premium.
Ngokufanayo, ezinyangeni ezimbalwa emuva ngathenga i- “Elementor pro plugin“. Le plugin manje usuku lithole ukuthandwa okukhulu. inzuzo yale plugin ukufaka ngokuzenzakalela imigqa yekhodi ngemuva. Ngale plugin, engeza isici sokuhudula bese uphonsa ngivumele ngithuthukise kungakapheli izinsuku ezimbalwa. Lokhu “I-Elementor pro” i-plugin ingibiza 1000 kanye namaDola ngonyaka ephindaphindwayo.
Ama-plugins we-Freemium afana nokunambitheka kwe-ayisikhilimu. Awukwazi ukuthola i-scoop edingekayo. Kepha ungazi kalula ukuthi leyo plugin ethile ye-WordPress isebenza kanjani, kuzoba wusizo kanjani uma uqhubeka nomsebenzi wabo?
Uma ungumuntu oqalayo ngamunye, Mina ngokwami ​​angifuni ukuba uyofuna i-plugin ye-premium esigabeni sokuqala. Kufanele uthuthukise iwebhusayithi enezici ezibalulekile esikhundleni sokuzakhela ezingeni lobuchwepheshe. Njengoba ukhula ngebhizinisi lakho ukuthenga i-plugin ye-premium kuzofana nocezu lwekhekhe.
Ngaphandle kwalokhu ngincoma wena uqobo ukuthi ungalandi ama-plugins we-premium ngokungenasimiso. Njengoba ngishilo kuwe ngaphambili, zakhiwa ngaphansi kwelayisense yomphakathi jikelele. Kusho ukuthi noma ngubani angangeza imigqa yekhodi kuyo, yenza kabusha futhi uyilayishe kwi-inthanethi ilebula mahhala.
Okubi ngokulanda ngokungekho emthethweni ukuthi banecezu lekhodi elingalandelwa kalula futhi elingangena kalula kuwebhusayithi yakho kalula kamuva. Ukugenca kusho ukuthola ikhodi yabo ebhalwe ngokwabo. Bayayazi indlela yokuqhekeza leyo khodi futhi bathole ukufinyelela kuwebhusayithi. Lokhu kuba ukudumazeka ngempela kuwe. Siphakamisa mathupha ukuthi ulanda ama-plugins asemthethweni Indawo yokugcina ye-WordPress.
Kukonke, Amanye ama-plugins we-WordPress akubiza imali, kunezinkulungwane zama-plugins endaweni yokugcina ye-WordPress. Ungathola kalula enye indlela eyodwa noma enye. Uma othile ekubiza, akusho ukuthi omunye umakhi we-plugin owenza kanjalo. Ngaphezu kwakho konke, ama-plugins akubiza imali njalo ngenyanga, ngonyaka kanye, noma njalo, kuncike ngokuphelele emfunekweni yakho ukuthi uhamba kanjani nayo.
Ngingathenga isizinda kusuka ku-Godaddy ne-Host ku-WIX?
Previous PostUngakanani imali ongayenza nge-WordPress Blog?
Ngingayakha yini iwebhusayithi ngeWordPress ngaphandle kwesizinda?